HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo xiiseyneysa xiddiga Chelsea Romelu Lukaku
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku ayaa lagu soo waramayaa inuu isha ku hayo Paris Saint-Germain .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa Shaki ku yimid booskiisii ​​​​koowaad ee Thomas Tuchel ka dib markii uu qirtay inuu aad u doonayay inuu ku laabto Inter Milan mar uu dhawaan bixiyay Wareysi.
Mustaqbalka fog ee Lukaku ayaa weli su’aal la gelinayaa, inkastoo aan loo maleyneynin inuu halis ugu jiro inuu lumiyo maaliyadda Chelsea sannadka 2022-ka.
Si kastaba ha ahaatee, El Nacional ayaa ku warameysa in Blues ay weli u furan tahay inay iska iibiso ciyaaryahankii hore ee Everton, iyadoo PSG ay haatan ku jirto feejignaan bixitaanka Kylian Mbappe ee la filayo.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in hogaamiyayaasha Ligue 1 ay diyaar u yihiin inay bixiyaan €90m (£75.3m) si ay u helaan saxiixa Lukaku, weeraryahanka ayaa laga yaabaa inuu tijaabiyo rajada uu ugu dhaqaaqayo Parc des Princes.
Lukaku ayaa 20 kulan oo uu Blues u saftay u dhaliyay 8 gool 2 kalena caawiye ka noqday wuxuuna qandaraas kula jiraa Stamford Bridge ilaa 2026.